Foxconn inovhurazve fekitori yayo muIndia mushure meApple "chirango" | Ndinobva ku mac
Foxconn inovhurazve fekitori yayo yeIndia mushure meApple 'kurangwa'
Apple inoda kuvimba neChina zvishoma, uye zvishoma nezvishoma iri "kuraira" vatengesi vayo kuti vavhure zvidyarwa zvitsva zvekugadzira kune dzimwe nyika, seIndia. Foxconn, mumwe wevanonyanya kuunganidza Apple, mukubatana nehurumende yeIndia, akavhura mafekitori matsva munyika iyoyo, asi ave nezvinetso zvakakomba nemamiriro ehutano evashandi vayo.
Hurumende yeIndia yakazvipira kuvaka nekuchengetedza dzimba dzekurara nedzimba dzekudyira dzinogara zviuru zvevashandi paFoxconn plant. Asi nhema mamiriro ane hutano yenzvimbo idzi dzekugara, dzakashorwa pachena mwedzi wapfuura, dzakatsamwisa Apple zvekuti yakamanikidza Foxconn kuvhara chirimwa kusvika dambudziko ragadziriswa. Zvinoita sokuti chirango chacho chatanga kushanda.
Foxconn anga achiunganidza iyo iPhone 12 muIndia kwenguva yakareba, uye ikozvino yaive kuyedza kuzviita neazvino mhando dze iPhone. iPhone 13. Asi Apple yakafunga kumisa kugadzira pachirimwa munyika iyoyo nekuda kwehutano hwakataurwa nevashandi vepafekitori iyi.
Mwedzi wapera, agency Reuters yakatumira a reportage kwaakatsanangura kusachena kwevashandi veFoxconn vanogara muIndia. Vakatsvikinyidzana mudzimba dzakatsvikinyidzana, dzimba dzokudyira dzine zvokudya zvakasakara, uye vamwe vachirara pasi, mumakamuri anogara vanhu vari pakati pevatanhatu kusvika makumi matatu.
Vashandi vanosvika mazana matatu vakadhakwa
Pamazuva iwayo, vashandi mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakatambura a kudhakwa nokuda kwezvokudya zvakanga zvaora. Pakabuda nhau, Apple yakakurumidza kumanikidza Foxconn kuvhara chirimwa ichi kudzamara mamiriro ese anosiririsa evashandi vemufekitari agadziriswa. Chimiro chevashandi ve17.000.
El hurumende yeIndia, inoona nezvekuvakwa kwedzimba dzevashandi ava, yakatotora matanho uye yave kuzovaka mapavilions matsva ekurara. Zvinofungidzirwa kuti zvichatora mwedzi miviri kana mitatu kuti vashandi vose vagadzirwe panzvimbo itsva.
Parizvino, kugadzira kunotanga zvakare svondo rinouya nevashandi vanopfuura zana. Uye zvose zviri pasi kutarisira Apple, kuitira kuti izvi zvisaitike zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Foxconn inovhurazve fekitori yayo yeIndia mushure meApple 'kurangwa'